मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन ढिला हुनुको कारण बाहिरियो ! « Ok Janata Newsportal
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन ढिला हुनुको कारण बाहिरियो !
काठमाडौं । यतिबेला नेपाली राजनीतिक वृत्त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको माहोलले तातेको छ । पाँचवर्षे म्यान्डेड पाएको सरकार, पहिलो पटक संघीय संरचनामा मुलुक अभ्यस्त भइरहेका बेला इतिहास लेखाउनका लागि पनि सांसदहरु मन्त्रीको ताकेता गरिरहेका छन् ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेरका लागि सहमति भइसकेको छ ।
अब अध्यक्षद्वयबीच मन्त्रीको भागबण्डाका विषयमा छलफल भइरहेको छ । ६०–४० की बराबर भन्नेमा छलफल जारी रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले बहाल मन्त्रीहरुले पनि सरकार छाड्ने मनसाय देखाएका छैनन् । कसैलाई काखी च्याप्ने, कसैलाई पाखा लगाउने प्रवृत्तिले मन्त्रीहरु पनि अध्यक्षद्वय प्रति असन्तुष्ट रहेका नेकपाका एक नेताले ओकेजनतालाई बताए ।
बहालवाला मन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट बाहिरिने सम्भावना छैन । खानेपानी मन्त्री बिना मगर भने यसपाली अध्यक्ष दाहालको आशिर्वाद नपाउने देखिएको छ । पारिवारिक रुपमा नातावादको आरोप खेरिरहेका दाहालले यसपटक मगरलाई मनाउने प्रयत्न थालेका छन् ।
यद्यपि दशवर्षे सशस्त्रद्वन्द्व होस् वा अन्य परिवर्तनमा परिवारका सदस्यले गरेको योगदानलाई बिर्सन नमिल्ने दाहालले बताउँदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार दशैँयता मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नगर्ने की भन्ने विषयमा छलफल चलेको छ ।
दशैँ तिहारसम्म धेरै ठूलो व्यस्तता नरहने भएकाले पनि कोरोनाविरुद्धको अभियानमा बहालवाला मन्त्री नै जानकार रहेकाले पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नहुने संकेत पनि देखिएको छ ।